ခြောက် Sigma အရည်အသွေးကုန်ထုတ်လုပ်မှုသင်တန်းသင်တန်းများမလေးရှားအမှီ
MBizM မလေးရှား & သြစတြေးလျ
Kursus ခြောက် Sigma
ခြောက်လ Sigma သင်တန်းအစီအစဉ်များတွင်မလေးရှား
ခြောက် Sigma အဝါရောင်, အစိမ်းရောင် & Black ကခါးပတ်, ကုန်ထုတ်လုပ်မှု, အရည်အသွေးသင်တန်းအမှီ
IASSC & SSC အသိအမှတ်ပြုသင်တန်းအဖွဲ့
MBizM Sdn ။ Bhd အရှေ့တောင်အာရှတလွှားလေ့ကျင့်ရေးရဲ့ span, သာ. ကြီးမြတ်အာရှ & သြစတြေးလျနှင့်အတူမလေးရှားနိုင်ငံရဲ့နံပါတ်တစ်ပိန်ခြောက် Sigma သင်တန်း & အတိုင်ပင်ခံအဖြစ် branded ဖြစ်ပါတယ်။ MBizM မလေးရှားခြောက် Sigma, ပိန်, အရည်အသွေးနှင့်ဆော့ဖကျွမ်းကျင်မှုသင်တန်း Programs ကိုကမ်းလှမ်း
MBizM ဗီဒီယိုတင်ပြ / ပြည်သူ့သင်တန်းပြက္ခဒိန်ဇန်နဝါရီ - ဇွန် & ဇူလိုင် - ဒီဇင်ဘာ 2019
ဒေါက်တာ Satnam Singh ကသင်တန်းပေးသူ / သတင်းထုတ်ပြန်ချက် & အသိအမှတ်ပြုရဲ့
• IASSC အသိမှတ်ပြုလက်မှတ်နှင့်အတူခြောက်လ Sigma အဝါရောင်ခါးပတ်သင်တန်း
• ခြောက်လ Sigma Green Belt ပြည်သူ့ / တစ်ဦးချင်းသင်တန်းအမှတ်စဥ်
• ခြောက်လ Sigma က Black Belt Accelerated သင်တန်း
• ခြောက်လ Sigma စာရင်းအင်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းသင်တန်းအမှတ်စဥ်
ခြောက် Sigma မှဘက်စုံနိဒါန်း•
• CISS / ဘက်စုံလုပ်ငန်းသင်တန်း (Service ကို & ထုတ်လုပ်ခြင်း) မှီ
• (EXIN လက်မှတ်ထုတ်ပေးရေး) အိုင်တီအမှီ
• QIT / QCC နှင့် 7QC Tools များသင်တန်း
• ကုန်ထုတ်လုပ်မှုသင်တန်းအမှတ်စဉ်များအတွက် Value ကို Stream မြေပုံ
• QS E3 Process ကို Excellence သင်တန်း
• Black ကခါးပတ်သင်တန်းအစီအစဉ် Up ကို Step
ပြဿနာဖြေရှင်းနိုင်ရန်• 8D ချဉ်းကပ်
MBizM ပိန် & အရည်အသွေးစီမံခန့်ခွဲမှု
ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းအစီအစဉ် (RCA) အကြောင်းလုပ်ငန်းသင်တန်းအစီအစဉ်, Value ကို Stream မြေပုံ (VSM လက်ရှိ & အနာဂတ်နိုင်ငံတော်),7QC Tools များ & QCC / QIT, Root အမှီ, စစ်ဆင်ရေးစီမံခန့်ခွဲမှု, စုစုပေါင်းအကျိုးရှိကို Maintenance (TPM) အမှီအမြန်ပြောင်းလဲ / SMED & Poka- ထမ်းဘိုးကို, Kaizen အတွက် 5S နှင့် 8 စွန့်ပစ်, ပြဿနာဖြေရှင်းခြင်း Tools များ, တိုယိုတာထုတ်လုပ်ရေးစနစ် (TPS), ဆယ်လူလာထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း, ယေဘုယျအားပစ္စည်းထိရောက်မှု (OEE), စာရင်းအင်းလုပ်ငန်းစဉ်ထိန်းချုပ်ရေး (SPC), ပျက်ကွက်ခြင်း Mode ကိုနှင့်အကျိုးသက်ရောက်မှုအားသုံးသပ်ခြင်း (FMEA), တိုင်းတာခြင်းစနစ်များအားသုံးသပ်ခြင်း ( MSA ကို), စုစုပေါင်းအရည်အသွေးစီမံခန့်ခွဲမှု (TQM), ထိရောက်သောယ်ယူခြင်း, Inventory & Store မှာစီမံခန့်ခွဲမှု, အရည်အသွေးရာထူးအမည်ဖြန့်ကျက် (QFD), ပိန်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုဆိုင်ရာအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ, ပိန်ေူပာင်းလဲရေးကိုအစီအစဉ် (LTP)
Kursus Latihan ခြောက် Sigma အဝါရောင်, အစိမ်းရောင် dan က Black Belt
ခြောက်လ Sigma အဝါရောင်ခါးပတ်လက်မှတ်ထုတ်ပေးရေး
အဝါရောင်ခါးပတ်သင်တန်းသားများ, ပိန်လုပ်ငန်းသဘောတရားများ၏အသိပညာရဖို့ Non-Value-added ဒြပ်စင်များနှင့်လှုပ်ရှားမှုများခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ကြသည်လိမ့်မယ်
ခြောက်လ Sigma Green Belt သင်တန်းအမှတ်စဥ်
Green Belt ပါဝင်ခြောက် Sigma အခြေခံမူများနှင့်အညီအတွက် DMAIC မော်ဒယ်အပေါငျးတို့သရှုထောင့်များစွာနှံ့နှံ့စပ်စပ်သိနားလည်မှုရရှိပါလိမ့်မယ်
ခြောက်လ Sigma က Black Belt သင်တန်း
ခြောက်လ Sigma က Black Belt သင်တန်းအမှတ်စဥ်, လုပ်ငန်းစဉ်သည်စွမ်းဆောင်ရည်တိုးတက်ကောင်းမွန်မြင့်မားသောသက်ရောက်မှုစီမံကိန်းများကိုကယ်နှုတ်တော်မူခြင်းနှင့်သိသာထင်ရှားသောကုန်ကျစရိတ်ငွေစုအောင်မြင်ရန်ဖို့ဒီဇိုင်းပြုလုပ်
ခြောက် Sigma (SATSS) သင်တန်းအမှတ်စဥ်အတွက်ခြောက် Sigma စာရင်းအင်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း Tools များအမှီ
ဒီပရိုဂရမ်အရှိဆုံးသင့်လျော်သောစာရင်းအင်း Tools များလုပ်ငန်းစဉ်တိုးတက်မှုစီမံကိန်းများအတွက်အသုံးပြုခံရဖို့တွေ့သောသူခြောက်ဦး Sigma Practitioner ကဒီဇိုင်းဖြစ်ပါတယ်
ဒေတာများ Tools များ & မဟုတ်သော -Parametric စမ်းသပ်မှု, Hypothesis စမ်းသပ်ခြင်း, Sigma Value ကို / Z-Bench, စာရင်းအင်းများအတွက် Graphical Tools များ, Pareto / Run ကိုဇယားများ, ကွက် / Dot / အရပ်ရပ်သို့ကွဲပြားစေ / Matrix / အချိန်စီးရီးကွက် & Histogram
အရည်အသွေးရာထူးအမည်ဖြန့်ကျက် (QFD) သင်တန်း
အရည်အသွေးရာထူးအမည်ဖြန့်ကျက် features တွေ, attribute တွေ, ဒါမှမဟုတ်တစ်ဦးကုန်ပစ္စည်းသို့မဟုတ်ဝန်ဆောင်မှုအရည်အသွေးမြင့်ပေးသောလုပ်ဆောင်ချက်များကို၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုများအတွက်နည်းစနစ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာဖောက်သည်များ၏အသံအပေါ် အခြေခံ. အရည်အသွေးကိုကုန်ပစ္စည်းသို့မဟုတ်ဝန်ဆောင်မှုပေးအပ်အတွက်အထောက်အကူဖြစ်စေဖြစ်ပါသည်
သမိုင်း & ဘယ်အရာကို QFD တစ်မဟာဗျူဟာ Tool ကို, Core မော်ဒယ်အဖြစ် QFD ဖြစ်ပါသည်, Customer များ၏အသံ, သစ်ပင်, Pugh Matrix, ဆှဖှေဲ့ပုံကြမ်း, Kano & Models, နည်းပညာအကဲဖြတ်, QFD ညမညသဘောတရား / Matrix / Pittfall & ဥပမာ Down Drilling
လုပ်ငန်း (Service ကို & ထုတ်လုပ်ခြင်း) သင်တန်းအမှတ်စဥ်အမှီ
တစ်ဦးကပိန်လုပ်ငန်းအပြည့်အဝက၎င်း၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းပုံစံသို့ပိန်အတွေးအခေါ်နှင့်နည်းစနစ်ပေါင်းစပ်ထားပြီးအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ပိန်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုနည်းစနစ်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုကဏ္ဍတွင်ဖွံ့ဖြိုးခဲ့ကြသည်ပေမယ့်ကုမ္ပဏီများသည်မကြာမီအားလုံးထုတ်လုပ်ဖြစ်စဉ်များသည် non-ကုန်ထုတ်လုပ်မှုလှုပ်ရှားမှုများအားဖြင့်အစပျိုးဖြစ်ကြောင်းသဘောပေါက်
ပိန် & စွန့်ပစ်စီမံခန့်ခွဲမှု, လုပ်ငန်းခွင်အဖွဲ့, Standard သူ Work, မှားယွင်းနေသည်သက်သေပြ, Jidoka & Andon, ထုတ်လုပ်မှု level, JIT, ဆယ်လူလာ & Kanban, Value ကို Stream မြေပုံ, စုစုပေါင်းအကျိုးရှိကို Maintenance, OEE & စက်ရုံ Layout များ & လျင်မြန်စွာပြောင်းလဲ
အမြစ်အကြောင်းအားသုံးသပ်ခြင်း (RCA) သင်တန်းအစီအစဉ်
အဆိုပါသင်တန်းပြီးတော့စစ်ဆေးအတည်ပြုပါလိမ့်မည်သည့်အလားအလာအမြစ်အကြောင်းတရားများကိုသိရှိနိုင်ဖို့လျှောက်ထားနိုင် Logical များနှင့်အမြစ်အကြောင်းအားသုံးသပ်ခြင်းကိရိယာများ, ကိုဖုံးလွှမ်းလိမ့်မယ်
RCA, အမြစ်အကြောင်းအားသုံးသပ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်၏နိဒါန်း, ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းအကြောင်း Logical, RCA Tools များ & အဆိုပါခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း Process ကိုစီမံခန့်ခွဲ
ငါး core ကိုပိန်အခြေခံမူသို့ TPS နှင့်ထိုးထွင်းသိမြင်မှု၏ဇစ်မြစ်၏အထွေထွေအသိပညာ
အရည်အသွေးတိုးတက်မှုအသင်းများ & 7QC Tools များသင်တန်း
ဒီအလေ့ကျင့်ရေးအထုပ် problemsolving လေ့ကျင့်ခန်းအတွက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများအတွက် QITs နှင့်သက်ဆိုင်ရာ tools များ (7QC Tools များ) ၏ခြုံငုံသုံးသပ်ပေးသည်။
သင်တန်းသားများကိုလေ့ကျင့်ရေးရဲ့အဆုံးမှာအောက်ပါ Tools များနှင့်အတူကောင်းစွာ-ကိုလညျးတတျကြှမျးဖြစ်လိမ့်မည်: Sheet များ, Pareto ဇယား, Flow ဇယားအကြောင်း, အကျိုးပုံကြမ်း Check Histogram, အရပ်ရပ်သို့ကွဲပြားစေပုံကြမ်း, ထိန်းချုပ်ရေးဇယား
ကုန်ထုတ်လုပ်မှုများအတွက် Value ကို Stream မြေပုံ (VSM) သင်တန်းအမှတ်စဥ်
ဒီ Value ကို Stream မြေပုံသင်တန်းမှာတော့သင်တန်းသားများကိုပိန်စဉ်းစားတွေးခေါ်ကိုအလွန်ဖြစ်စဉ်များရိုးရှင်းများနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်တိုးတက်ကောင်းမွန်လာနိုငျသောကျယ်ပြန့်လက်ခံကျင့်သုံးတိုးတက်မှုချဉ်းကပ်မှုဖြစ်လာသည်ကိုဘယ်လိုလေ့လာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ပိန်စဉ်းစားတွေးခေါ်၏စိတ်နှလုံးမှာဖောက်သည်များအတွက်တန်ဖိုးကိုဖန်တီးခြင်းနှင့်စွန့်ပစ်ဖျက်သိမ်းရေးပေါ်အာရုံစူးစိုက်ဖြစ်ပါသည်
QS E³ Process ကို Excellence ခြင်း simulation သင်တန်းအစီအစဉ်
3) ထိုကဲ့သို့သောခြောက် Sigma, ပိန်စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် Business Scorecards အဖြစ် Toolbox ကနေစတင်တည်ထောင် DMAIC (Define တိုင်း, Analyze, Improve & ထိန်းချုပ်ရေး) နည်းစနစ်နှင့်အသုံးပြုမှုကိရိယာများနှင့်နည်းစနစ်အတိုင်းလိုက်နာရန်, စဉ်ဆက်မပြတ်တိုးတက်မှုနည်းစနစ်ကို အသုံးပြု. စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုစစ်ဆင်ရေး၏စွမ်းဆောင်ရည်အမြင့်ဆုံး
ခြောက် Sigma Step-Up ကိုက Black Belt အစီအစဉ်အမှီ
အဆိုပါလက်မှတ်ပိန်ခြောက် Sigma က Black Belt စနစ်များနှင့် tools တွေကိုထောက်ပံ့အပါအဝင်ပိန်ခြောက် Sigma အတွေးအခေါ်များနှင့်အခြေခံသဘောတရားများ, ရှင်းပြနိုင်သူတစ်ဦးပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဖြစ်ပါတယ်။
မလေးရှားခုနှစ်တွင် MBizM NO.1 ခြောက် Sigma သင်တန်းပေးသူမှလှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည်
စစ်ဆေးရေး 2.0 Thread: တသမတ်တည်းတူညီသောလမ်း, တိုင်းအချိန် Threads ကိုစုံစမ်းရန်စေရန်မည်သို့လေ့လာပါ။ စွန့်ပစ်ဖျက်သိမ်းရေးနှင့်အမှားလျှော့ချ.
ကျနော်တို့ဒါ့အပြင် Group မှသင်တန်းစုံစမ်းရေးနိုင်ငံတကာမှာတော့-အိမ်လှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည်
MBizM ခြောက် Sigma - အထူးသင်တန်းများ
ခြောက် Sigma (SATSS) တွင်စာရင်းအင်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း Tools များ
ခြောက်နှင့်အတူ Project မှစီမံခန့်ခွဲမှု
ဖြစ်စဉ်ကို Excellence အရည်အသွေးသင်တန်း (PEQT)
Microsoft က Excel ကိုလက်သင်, အလယ်အလတ် & အဆင့်မြင့်သင်တန်း။ သိကောင်းစရာများ, နည်းပညာ, Functions များ & အင်္ဂါရပ်များသုံးစွဲဖို့ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူ
© 2019 | မှပံ့ပိုးသည် ရိုးရှင်းသောဘလော့ WordPress ကိုအဓိကအကြောင်းအရာ